Ari Twitter Mune Yako Sevhoni Chiteshi Asi? | Martech Zone
Muvhuro, October 12, 2009 Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Kana ndikasheedza kambani yako nechichemo kana mubvunzo, mumiriri wevatengi vako ndiye chete anondinzwa. Kana ndikabvunza paTwitter, hazvo, vateveri vangu zviuru zvisere vanondinzwa… uye avo vanodetemba vanowedzera vateereri mumasaiti avo. Twitter iri kukurumidza kuve demokrasi chinhu kune vatengi vanoda mhinduro.
Uri kuteerera kuTwitter? Twitter haisi fashoni kana kambani… inzira inoshanda yekutaurirana. Iwe haufanire kutora chikamu (kunze kwekupindura), asi iwe haufanire kunge usiri kufuratira iyi yakakosha chiteshi.
Salesforce nguva pfupi yadarika yakaburitsa kubatanidzwa kweTwitter mune yavo yebasa gore (ivo vane mamwe masocial media vanobatanidzwa zvakare). Waizviziva here kuti unogona kuongorora Twitter neSalesforce's Sevhisi Cloud, kuwedzera basa rako revatengi?
Tikugashire kune iro renyika rakambobatana, rinogara riripo, riine pfungwa, pakufamba mutengi. Uyu mutengi anonzwisisa kuti iye zvino vane simba. Ivo vava kutarisira zvinopfuura chete chigadzirwa kana sevhisi kubva kwauri. Vanotarisira hukama huri pamitemo yakaenzana. Ivo vanotarisira kuve pakati penyika yako. Uye iwe unofanirwa kuzviisa ipapo. Iwe unofanirwa kuve kambani yevatengi.
Pashoma ndaikurudzira kuve nechikafu kubva ku Twitter Kutsvaga.
Tags: Mabatiro evatengiradian6salesforceTwittertwitter kusangana
Inopindirana Multi-Channel Kushambadzira kubva kuPodium
Gumiguru 13, 2009 na3: 07 PM
Social media haisisiri mubvunzo wekuti sei, asi sei. Tinokutendai nekutikurudzira sechombo chekuteerera uye chekuita.
Community Manager paRadian6